Barcelona oo 24 saac ee socda lasoo wareegeysa daafac cajiib ah
Thursday, January 24th, 2019 - 13:43:31
Monday January 08, 2018 - 14:18:33 in Wararka by Hussein Hadafow
Sida laga asoo xiganayo, Alargue Caracol, daafaca dhexe dalka Colombiia,Yerry Mina ayaa lagu wadaa in 24 saac ee soo aadan uu soo gaaro magaalada Barcelona si uu tijaabo caafimaad ugu maro qandarasna u saxiixo kooxda barcelona.
Intaa kadib kooxaha Palmieras iyo Barcelona ayaa laga doonayaa in ay shaaciyaan heshiiska , taasoo lagu qiyaasay in kooxda reer Spain ay ku qaadan doono 11 ilaa 12 milyan oo ginni., waxaana lacagtaas qeyb ka helaya kooxdiiisi hore, Independiente Santa Fe.
Xoghayaha farsamada Barca, Robert Fernandez ayaa Mina ku qiimeeyay daafacyada ugu wanaagsan waxuuna rajeynaya inuu wax weyn kusoo kordhiyo kooxda Tababare Ernesto Valverde, kadib dhaawacii soo garat Umtitti iyo Mascherano oo go’aansatay inuu kooxda isaga tago isagoo ku biiraya kooxda Hebei China Fortune ee dlak Shiinaha.
Waxaa su’aal ka imaan doontaa fayo qabka laacibkan oo labadii bil eee lasoo dhaafay fasax ku jiray maadaama uu xernaa horyaalka Brazil, waxayna qadan doontaa mudo inuu la qabsado xaalada kooxdiisa cusub.
Kooxda Barceona ayaa isbadal weyn oox agga ciyaartoyda sameyneysa waxayna horey ula asoo wareegtay Coutinho oox agga weerarka xoojin doona iyo Yerry Mina oo daafac isan kaabi doona.